Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa Maanta oo Sabti ah waxa ay kulan ku yeelanayaan
Home Somali News	Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa Maanta oo Sabti ah waxa ay kulan ku yeelanayaan
Wararka maanta somalia (muqdisho_somaliayatimes) Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa Maanta oo Sabti ah waxa ay kulan ku yeelanayaan xarunta golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Ajendaha kulanka ayaa ah warbixin Miisaaniyadeedka iyo sharciga Hanti dhowrka,waxaana Xildhibaanada ay aad Maanta uga doodi doonaan warbixintii Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka.
Xildhibaanada Golaha Shacbak ayaa xalay lagu wargeliyay in kulanka Baarlamaanka uu jiro Maanta oo Sabti ah,isla markaana cod loo qaadiyo Sharciga Hanti dhowrka oo maalmo ka hor la soo gabagabeeyay akhrintiisa.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale waxa ay dood kulul ka yeelan doonaan Warbiixntii Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ee aheyd eedeynta dhinaca musuq maasuqa u jeediyeen Wasaaradda Maaliyadda iyo Gobolka Banaadir.
Qoraal shalay kasoo baxay Xafiiska Hanti- Dhowrka Qaranka ayaa waxaa walaac looga muujiyay qoraalkii horay uga soo baxay Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka,isla marlaana lagu shegay in aan wadatashi iyo xog-wareysi lagala yeelan Hay’adihii loo igmaday kormeerka Maaliyadda dalka.
source by radiodalsan
Korneel Caare oo u hanjabay Hargeysa shegey inuu weerar qaadi doono
Inter Milan Oo Ku Soo Biirtey Tartanka Saxiixa Paul Pogba
Deni OO xildhibaan cawil u hanjabey eedeymana dusha...
Micnaha Ku Hoos Duugan Guuritaanka Guddoomiye Mursal IYo...
Somaliyatimes waa shabakad noocma ah?